WOWOW Hot And Cold Faucet Nanapaka Nikel
Home / Fitaovana an-dakozia / Solon-trondro mameno rano / WOWOW Nikela borosy mafana mamy sy mafana mangatsiaka
WOWOW Hot Ary Mangatsiaka Faty Pot Fencet Nihosin-koba Nokosina
Creative Wall Mount 2 Hole pot Faucet 2311400 - Ho an'ny fampiasana rano mafana sy mangatsiaka.
Ny valivan'ny NSF fanamarinana valva dia manome fampisehoana maimaim-poana.
Manamaso ny atiny amin'ny alàlan'ny asa tanana manokana ho an'ny sivana mineraly sy firma.
Mihodina moramora ny valva seramika. Tsy misy feo tsy mahazatra rehefa mikoriana ny rano.
Ny aoperl neoperl namboarina dia manome be dia be sy mikoriana tsara amin'ny rano.
Fitaovana vatana: fananganana varahina matevina, miantoka ny fiatrehana sy ny fampiasana azy ela
Fanamarihana am-pitandremana 1: mitandrema rehefa misintona noho ny fananganana mafy!
Fanamarihana mafana: aleo mitandrina ny may rehefa feno rano mafana!
Lava nahoritra: 13.1 santimetatra
Halavany tsy voafehy: 22 santimetatra
Hole Sehatra: 5.9 santimetatra
Haavony: 6.7 santimetatra
Ny Neoperl ABS dia manome rano mikoriana tsara sy maharitra ao anaty tahiry be dia be, afaka mameno haingana ny vilany. Ary koa, ny aoterine dia afaka esorina amin'ny vola madinika mora foana hanadio sy hisolo.
Drafitra fanovana indroa
Drafitra fehitohy kambana ho an'ny fihodinana 360 degre, azonao atao ny misintona azy sy malefaka, manatsara ny kalitao sy ny hafainganao fahana. Tsy mila maka ny vilanyo handrianao rano ianao. Ary azo averina ihany koa rehefa tsy ampiasaina.
American Standard NPT
Ny mpampitohy NPT amin'ny fitaovana varahina matevina, mora hitazona. Ny fitaovana vita amin'ny baoty dia amin'ny kalitao tsara, tsy loto, ary ny harafesina. Ny mpampitohy NPT amin'ny habe mahazatra amerikana, tsy mila manahy momba ny olana fametrahana izy.
Sakafo mameno potika ho an'ny rano mafana sy mangatsiaka. Azafady, mitandrema rehefa feno ny rano mafana, ny hafanana dia hafanana avo, mila hikasika ny tampoka raha tsy maratra tsy ilaina ianao.
SKU: 2311400 Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Solon-trondro mameno rano Tags: famoahana famoahana, Fitaovana an-dakozia, rava matevina
Pull Down Paucet White Wauve White